Soomaaliya oo qaadacday shir ka dhici lahaa Sweden – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Soomaaliya oo qaadacday shir ka dhici lahaa Sweden
Muqdisho – Mareeg.com: Wasaaradda iyo Rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa qaadacay shir looga hadlayo ganacsiga oo ka dhici lahaa dalka Sweden.
Shirkaan oo looga hadlayo dhiirigelinta ganacsiga Soomaaliya iyo sidii aduunka loogu soo jeedin lahaa ayaa dowladda Soomaaliya qoonsatay qaabka ka qeybgalka, iyadoo sida martiqaadka ka muuqatay lala simay maamul goboleedyo.
Agaasimaha Rugt Ganacsiga Soomaaliyeed, Cabdi Abshir Dhoorre oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sababta ay u qaadaceen shirkaas.
Bayaan uu Agaasimaha Rugt Ganacsiga Soomaaliyeed, Cabdi Abshir Dhoorre u aqriyey warbaahinta ayaa waxaa ka mid ahaa:
Haddaba, xaaladda hadda shirku ku qabsoomayo wasaaradda ganacsiga iyo Rugtu waxay ula muuqataa sida:
1. Waxay ahayd in ganacsatada Soomaaliyeed oo ku urursan Rugta Ganacsiga intooda badan, wada-shaqayn dhab ahna kala dhaxayso wasaaradda ganacsiga in si wadatashi leh uu u hoggaamiyo wasiirka ganacsiga, taladoodana ay urursan tahay.
2. Ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed dhexdooda saameyn kuma lahan siyaasadda la isku haysto oo ganacsiga iyo ganacsatadu xuduud ma leh, gobol walba ayayna hantidoodu tallaa; marka in loola dhaqmo sida siyaasadeysan oo magacyadaas lagu casuumo nalama ahan.
3. Ajandaha waxaa ka maqan ganacsiga Soomaalidu waqtigan xaadirka ah ay ka miro-dhalin karto sida xoolaha, kalluumaysiga iyo beeraha, dhaqan ganacsi soo jireen ahna ay u leedahay.
4. Soomaaliya waxay u baahan tahay in laga caawiyo – Institutional Building – kuwa hadda jira, lana garab-galo, ganacsiga gaarka loo leeyahayna waa meesha kaliya ay Soomaaliya ka nooshahay, in la sii adkeeya maahane nalama ahan in ay caawineyso in si is-barabar-yaac ah lagu caawiyo.
5. Ugu dambeyn, isla markaana ah tan ugu muhiimsan waxay ahayd si dowlad-wanaagga la caawiyo, waxay ahayd in wasaaradda ganacsiga kaalin buuxda ku yeelato qaban-qaabada shirka, ajandaha, ka qayb-galka iyo qaabka ganacsatada loo dhiirri-gelinayo, taasina ma dhicin.
6. Wasaaraddii ganacsiga iyo warshadaha shirkii kama qayb-galayso, talana kuma lahan, sidaa darteed annagoo tixgelinayna dowlad-wanaagga iyo dhisidda hay’adaha ganacsiga, waxaan nala haboonaatay inaysan ka qayb-gelin shirkaas haddii aysan wasiirka iyo wasaarada ganacsiga iyo ganacsatada oo wadajira aysan ka qayb-galeen shirkaas.
Shirkaan ayaa waxaa marka laga soot ago dowladda Federaalka Soomaaliya, lagu casumay maamullada Somaliland, Puntland, maamulka KMG ah ee JUBA, waxaana dhinac kasta la siiyey 2 xubnood, taasoo dowladda Soomaaliya ka xanaaqday.
Waa shirkii 3-aad ee lagu qabanayo dal ajnabi ah oo ay dowladda Soomaaliya diido, iyadoo horay u diiday shir looga hadlayey qaxootiga Soomaalida oo ka dhici lahaa Nairobi iyo shir shidaalka ku saabsan oo ka dhici lahaa London.
Xukuumadda oo si daciifa uga hadashay dagaalka Marko